Tahaka ny nitomboan'i Jesosy
«Ary ny Zaza dia nitombo ko nihahery sady feno fahendrena; ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao Aminy.» - Lio. 2:40
Tokony hikendry ny hanolo¬kolo ny fironan'ny tanora ny ray aman-dreny sy mpanabe ka isaky ny ambaratongam-piainany dia mba haneho ny fahatsarana mifanaraka amin'izany vanim-potoana izany izy, sady hivelatra amin'ny fomba voajanahary toy ireo zava-maniry eny an-jaridaina.
Raha mbola kely i Jesôsy dia naneho hatsaran-toetra hafa kely. Vonona hanompo ny hafa mandra¬kariva ireo tanany tia manasoa. Nampiseho faharetana Izy ka tsy nisy na inona na inona afaka nanembantsembana izany, ary fahi¬tsiana izay tsy ambakan'ny fahamari¬nana velively. Tao anatin'ny fitsipi¬-pitondran-tena mafy toy ny vato¬lampy dia naneho ny fahasoavan'ny toetra feno fanajana olona tamin'ny fomba tsy misy fitiavantena Izy.
Nandinika ny fivelaran'ny heriny (herin'i Jesôsy) tamim-piheverana lalina ny renin'i Jesôsy, ary nandinika ilay fahatanterahana mahagaga teo amin'ny toetrany. Tamim-piravoravoana no nikatsa¬hany hampitombo izany saina mahiratra sy mora mandray izany. Nandray fahendrena avy amin'ny Fanahy Masina izy (ny renin'i Jesôsy) niarahany niasa tamin'ireo iraky ny lanitra teo amin'ny fanabeazana io zaza io, Izay hany afaka nanambara an'Andriama¬nitra ho Rainy. Avy tamin'ny vavany (vavan'ny reniny) sy avy tamin'ny horonan-taratasin'ireo mpaminany no nianarany momba ny zavatra any an-danitra. Ireo teny izay nolazain’Izy tenany indrindra tamin'i Mosesy ho an'ny Isiraely no indro izao nampianarina Azy teo am-pofoan-dreniny (...) Ary dia nivelatra teo anoloany ireo boky lehiben'ny asa noforonin'Andria¬manitra. Izy Izay nanao ny zavatra rehetra dia nianatra ireo lesona izay ny tanan'Izy tenany ihany no nanoratra izany teo amin'ny tany sy ny ranomasina ary ny haba¬kabaka (...). Ireo mponin'ny lanitra no mpiahy Azy, ary ny soatoavin'ny fisainana masina sy ny fikamba¬nana masina dia Azy.Hatramin'ny vao,niposahan'ny fahaiza-misaina tao anatiny dia tsy nitsahatra nitombo tamin'ny fahasoavana ara-panahy sy ny fahalalana ny fahamarinana Izy.
Afaka mandranto fahalalana tahaka izay nataon'i Jesôsy koa ny ankizy tsirairay. Rehefa miezaka ny hahalala Ilay Raintsika any an¬danitra amin'ny alalan'ny Teniny isika dia ho avy hanatona ireo anjely, hohatanjahina ny saintsika, hasandratra sy hohatsaraina ny toetrantsika. Hanjary hitovy bebe kokoa amin'Ilay Mpamonjintsika isika.